Luis Suarez oo Cunno, Bustooyin iyo xafaayado ugu deeqay….. – Gool FM
Luis Suarez oo Cunno, Bustooyin iyo xafaayado ugu deeqay…..
Byare June 17, 2017
(Salto) 17 Juunyo 2017. Dhaliyaha kooxda Barcelona Luis Suarez ayaa tabarucaad isugu jirta Cunno, Dhar, Xafaayado iyo waxyaabo kale gaarsiiyay dadkii dhibaatadu ka soo gaartay daadadkii ka dilaacday Salto ee dalka Uruguay.
Deeqda ayaa durba la gaarsiyay caasimada Montevideo waxaana si dhaqsi leh loogu gudbin doonaa waaxda isku duwida gar gaarka deg dega ee Salto maadaama ay iyadu tahay wakaalada ka masuulka ah qeybinta tabarucaadaha.
“Markale wuxuu muujiyay midnimo wuxuuna rajo iyo caawinba siyay boqolaal qoys kuwaa oo la dhibtoonaya daadadka,” Waxaa sidaa yiri Andres Lima ee ah duqa magaalada Salto.
“Badanaa marka la sameynayo tabarucaadaha ceynkan oo kale ah, dadku waxay doorbidaan in magacooda la qariyo, laakiin way fiican tahay in dadyowga Salto ay ogaadan in Luis Suarez uu taageerayo dhulkiisa hooyo.”.
Marka laga soo tago Salto waxay sidoo kale fatahaada wabiyada waxay sameeyeen gobolada Artigas iyo Paysandu, wararkii ugu dambeeyayna waxay tibaaxayaan inay saameysay in ka badan 7,000 oo ruux.